အတော်လေးမကြာခဏစုံတွဲများမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရန်အနှောင့်ယှက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးပါ။ ဒါပေမယ့်ထိရောက်သောရှိမရှိ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်အခါ Interrupt လိင်ဆက်ဆံမှုရတဲ့၏ကြီးမြတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလော နှင့်ဤနည်းလမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုမိတ်ဖက်များ၏ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေမလား?
ဆုတ်ခွာ Method ကို
အဆိုပါနည်းလမ်းသည်လူယခုအချိန်တွင် ejaculating ရှေ့တော်၌ထိုလိင်အင်္ဂါကနေလိင်တံကိုထုတ်ယူသောတကယ်တော့ပါဝင်ပါသည်။ ဒါဟာသုက်ပိုးအမျိုးသမီးပြင်ပမအင်္ဂါပေါ်ရမပြုခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပေသည်။ ယခင်အချိန်များကနေကျော် left သုက်ပိုး၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏ၏လိင်အင်္ဂါသို့ကျသွား၏အန္တရာယ်လည်းမရှိအဖြစ်ဤနည်းလမ်းနှင့်အတူထပ်ခါတစ်လဲလဲလိင်ဆက်ဆံခြင်း, မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဖြစ်နိုင်ခြေသည့်အခါ Interrupt လိင်ဆက်ဆံမှု
အဖြစ်ဝေးတစ်ဦး Interrupt လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုယ်ဝန်အဖြစ်? ဒီရလဒ်ကိုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဥပမာကွန်ဒုံးမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ကနေ 85% ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများကိုပေးစွမ်းအကြောင်းကို 30% ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်သုက်ပိုးသုတ်ရည်ထဲမှာမသာသော်လည်း, predsemennoy အရည်, နှင့်၎င်း၏ output ကိုတစုံတယောက်သောသူသည်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှထိုသို့သောစိတ်မချရ။ ထို့အပြင်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ယခုအချိန်တွင်မိမိကိုမိမိထိန်းချုပ်ဖို့မလူအပေါငျးတို့, အထူးသဖြင့်ခက်ခဲကြောင့်ဒေါသမိတ်ဖက်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာကြားဖြတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုကျနော်တို့လိုချင်ပါတယ်သကဲ့သို့မြင့်မားသည်မဟုတ်, အထဲကပြန်သွားလေ၏။ ဒီတစ်ခါလည်း, ဒီနည်းလမ်းကိုဓတေား၏အခြားနည်းလမ်းများကျော်တစ်ဦးကိုနှိမ်နင်းအားသာချက်ရှိသနည်း အသုံးပြုနိုင်စွမ်း - တဦးတည်းအားဖြင့်၎င်း, ကြီးမား၏အားသာချက်။ အားလုံးအခြားမကြာခဏ, ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကဲ့သို့, အပြစ်တွေအဖြစ်အတော်လေးအငြင်းပွားစရာရည်ညွှန်းပါတယ်။
coitus interruptus အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်?
ဓတေားတစ်ခုချင်းစီနည်းလမ်းက၎င်း၏ pluses နှင့် minuses ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆရာဝန်တွေ, အနှောင့်ယှက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏စကားပြော, ပို. ပို. အဆိုပါ epithet အသုံးပြုနေသည် "မကောင်းတဲ့။ " ဒီနည်းလမ်းကိုဘာလဲကျန်းမာရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်သနည်း
ကျနော်တို့ပြီးသား coitus interruptus ကိုယ်ဝန်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းထွက်တွေ့ပြီ။ နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများမှတစ်ဦးနည်းလမ်းကိုဖြစ်ပါတယ်မှာအားလုံးကာကွယ်ပေးမထားဘူး။ အဆိုပါချွဲအမြှေးပါးရောဂါကူးစက်မှုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့်အတူဆက်သွယ်ပါ transmission အတွက်လုံလောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ဓတေား၏ဤနည်းလမ်းကိုသာသက်သေပြမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မိန်းမတို့အဘို့ဆိုး coitus interruptus? စာရင်းများအရအော်ဂဇင်ကိုခံစားဘူးသူအမြိုးသမီးမြား၏ 50%, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှောက်ယှက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ အော်ဂဇင်များအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထက်ပိုသောအချိန်နှင့်ဒီအချိန်ပဲမလုံလောက်ဘူးသည်ကြားဖြတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းလိုအပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတွေ့ကြုံတတ်၏။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်အော်ဂဇင်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုမရှိဘဲတစ်ဦးကစဉ်ဆက်မပြတ်လိင်, ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု, ပိတ်ဆို့မှုကိုနှင့်အမျိုးမျိုးသောရောဂါများအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကသိပ္ပံပညာရှင် Interrupt လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ပုံမှန်အလေ့အကျင့်အအေးပိုင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောယုံကြည်ကြသည်။
ယောက်ျားရဲ့အနျြးမာရေးအတှကျအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတှကျအသုံးပွု Withdrawal method ကိုလည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ လူတထုတ်ကြာသောအခါအခိုက်မှာလိင်အင်္ဂါ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆီးကျိတ်ဂလင်း၏ function ကိုပြောင်းလဲနှင့်လုံးဝလျှော့ဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့အမျိုးမျိုးသောမလိုလားအပ်သောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုရပ်တန်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ထို့ကြောင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါယောက်ျား၏ 50%, မှန်မှန် coitus interruptus ကျင့်သုံး။ သို့သျောလညျးဓတေား၏ဤနည်းလမ်းကိုခွန်အားမရှိခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, coitus interruptus ကနေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့သည်အန္တရာယ်အကျိုးဆက်များ မှလွဲ. , ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်သင်စိတ်ခံစားမှု၏တပြင်လုံးကိုအစအဆုံးအကုန်မပေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ကကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းမိတ်ဖက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်ကိုငါသိ၏။ စုံတွဲအဆက်မပြတ်ကြောင့်ယခုအချိန်တွင်လက်လွတ်မဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားနေသည်လျှင်, ယေဘုယျအားဖြင့်အပျြောအပါး၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဆိုနိုငျသနညျး
Shibari - အနုပညာအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုနှင့်မည်သို့ကိုယ်မှာစေသလော
စအိုလိင်ဆက်ဆံ - ပထမဦးဆုံးအကြိမ်
ကိုယ်ဝန်၏ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ် - ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်အာရုံ
အိမ်တော်အဘို့ LED မျက်နှာကျက်မီးခွက်
"ဘုရားသခင့်အတွက် Window" ရာအရပျကိုဆန်းစစ်
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့်တစ်ဦးစာအုပ် Make မှဘယ်လိုနေသလဲ?
သေသောနောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖြစ်ပျက် 25 မယုံနိုင်စရာအမှုအရာ
Thandie Newton ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဒါရိုက်တာအကြောင်းကိုပြောပြသည်
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ mini ကိုဘောင်းဘီတို
ပင်စိမ်း - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications